Toa tena tafiditry ny politika avo lenta anefa eo amin’ny tontolo ara-pitantanana ny baolina kitra Malagasy, raha tarafina amin’io tsy fahafahan’ny filohan’ny “Alefa Barea” mirotsaka ho filohan’ny Federasionina Malagasy na ny FMF io satria tsy nahafeno ny fepetra, dia ny fanohanana avy amina filohana ligy miisa telo. Lasa adihevitra be anaty tambajotran-tserasera io. Tsy fandokafana sanatria, fa kosa mba anisan’ny nanao ezaka goavana niteraka fahombiazana ho an’ny Barea izy, na tamin’ny fikarakarana lalao ara-pirahalahiana tany ivelany na tamin’ny fanetsiketsehana ny mpanohana. Mety samy maharesy lahatra avokoa ireo mpifaninana fa na izany aza dia tena mahalasa saina ihany. Dia tsy misy olona 3 amin’ny filohana ligy 22 tokoa ve resy lahatra tamin’Atoa Lova Ramisamanana izay tena noderain’ny mpakafy kitra ny finiavany ? Izany ve tsy midika fa efa nandeha ny fividianana tany ambadika ireo mpifidy ? Ny irariana dia mba hilatsahan’ny fanahy masina izay holaniana eo, ka mba tena hitondra avo hatrany ny kitra Malagasy fa tsy hibizina sy tena hanao fitaovana politika io sehatra io, ka tsy takona indray ilay tara-pahazavana efa nentin’ny Barea.